एक निबंध-तर्क - "एक मानिस र एक महिला बीच प्रेम"
यो विषय चलचित्र र पुस्तक, कविता, उपन्यास र छोटो कथा धेरै समर्पित छ। धेरै को लागि, हाम्रो छलफल विषयको आज - जीवन को अर्थ र आनन्दको रहस्य। सबैलाई कम्तिमा एक पटक, यो अनुभव गर्न जीवनको लागि भावना सम्झना। कसैले गर्दा अरूलाई, त्यसको विपरीत, यसको लागि प्रयास गर्नेछन्, पुनरावृत्ति को डर आगो जस्तै हुनेछ। पहिले नै अंदाजा छन् धेरै, यो भावना - (हामी तल प्रदान गर्नेछ निबंध परीक्षा) पुरुष र महिला बीच प्रेम। यस लेखमा हामी यो विषय मा काम दुई संस्करण प्रदान गर्नेछ, र शास्त्रीय कार्यहरूमा भावना को अर्थमा बारेमा बताउनुहोस्।
यो अवधारणा आज धेरै जटिल र अस्पष्ट छ। को कठिनाई को व्याख्या सबैको उहाँको समझ मा आफ्नै को कुरा राख्छ, छ। केही लागि यो एउटा उपहार र चुंबन अलविदा हो, र केही लागि यो जसको लागि कुनै दया आफ्नो जीवन बलिदान गर्न भावना, छ।
एक मानिस र एक महिला बीच प्रेम म्युचुअल र unrequited, भावुक, आगोको र पनि, platonic: (काम तलका लागि प्रतीक्षा) फरक छ। यो साँचो चमत्कार बारेमा केही शब्द मा भन्न गाह्रो छ किन कि छ। तर हामी अझै पनि यो गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
हामी पहिले देखि नै भावना बारे कि कुरा निर्धारण गरेका छन्। तर के यो आवेग, आवेग, मित्रता वा बानी को भावना बारेमा, प्रेम बारेमा छ बुझ्न कसरी? पुरातन Sages आवेग जसको शक्ति शक्तिशाली छ आगो, संग blazing, प्रेम तुलना, तर यो धेरै छिटो बाल्न हुनेछ। साँचो प्रेम जबकि तिनीहरू "राम्रो घरेलू" समान रूप र दृढ बल्छ कि "अनन्त ज्वाला" भनिन्छ।
साहित्यिक epochs र काम भ्रमण
एक मानिस र एक महिला (दुई भिन्न मा एक निबंध यस लेखमा प्रस्तुत गरिनेछ) सधैं कला को काम को एक जीत-जीत विषय भएको छ बीच प्रेम। एउटा चलचित्र र थिएटर प्रदर्शन - त्यो चित्र र कविता, उपन्यास, गीत, र पछि समर्पित थियो। मानवता को फरक epochs उनको लेखकहरूले र Sages कुरा कसरी गर्न सक्छ?
Amantes amentes - «प्रेमीहरू - पागल" - पुरातन रोमी लेखे, र आफ्नो सही थिए। पछि, Anacreon प्रेम को समय मजा भएको छ दौरान, कवि यो बराबरीको मा रक्सी संग राखे। तर यो Sappho को अत्याधिकै लोकप्रिय घनिष्ठ कविता भएको छ फेरि Olympus यो भावना उठाएर। मनपर्ने कवि परमेश्वर, एक मानिस र एक महिला बीच महिमा र idolizing प्रेम तुलना गरिएको छ। को बताछ को लेखन भजन एक प्रकारको उज्यालो र तीतो नै समय भावना थियो "देवहरूको मा जस्तै छ"।
ठूलो Petrarch र डेन्ट को उज्यालो हातले पुनर्जागरण मात्र चुनिएको पहुँचयोग्य छ कि भव्य उपहार यो भावना erected। तिनीहरूले पहिलो प्रेम contemplative, शुद्ध, उदात्त गाए।
अमर शोकमा "रोमियो र जूलियट" मा Uilyam Shekspir देखाइएको छ पछि यो केवल मृत्यु मान्नेहरूले बीच खडा गर्न सक्छ भनेर बलियो छ।
प्रत्येक उमेर प्रेम र यसको सुविधाहरू चित्रण गरिएको छ। भावना - - छ किन्न भनेर गर्दैन र जीत छैन सबैभन्दा ठूलो उपहार तर सार एउटै हो। त्यसैले गाह्रो छैन यो प्राप्त गर्न, राख्न र संरक्षण गर्न कसरी।
एक निबंध कसरी लेख्न?
तपाईं माथिको खण्डहरू बाट देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, पुरुष र महिला बीच प्रेम, को संरचना जो एक कठिन विषय लेख्न हुनेछ। यो तपाईं सोचाइ एक रचनात्मक, सक्रिय तरिका छ भने, यो उनको प्रदर्शन आधारित आफूलाई लेख्न राम्रो छ भनेर बुझ्ने गरिन्छ। बिल्कुल केहि मनमा आउँदा तर, अवस्थामा छन्। त्यसपछि, सायद, तपाईं र हाम्रो योजना सजिला मा आउनेछ। पहिलो विकल्प:
एक संक्षिप्त परिचय।
दोस्रो विकल्प थप साहित्य जोडिएको छ।
चाँदी आयु कविता मा प्रेम।
विकल्प मध्ये एक छनौट - र आफूलाई सिर्जना गर्नुहोस्। वा आफ्नै रचनात्मकता Unleash, किनभने आफ्नै तरिका सबैलाई, साथै आफ्नो विचार र दृष्टिकोण, अद्वितीय र रोचक।
निबंध-तर्क: "एक मानिस र एक महिला बीच प्रेम"
यो निबंध हामी प्रेम कुरा हुनेछ। र सटीक हुन, यो के हो र यो मानिसजातिलाई आवश्यक छ कि छैन भनेर हो?
प्रेम - को Proto-स्लाव भाषाहरु भाषा हामीलाई आए एक धेरै प्राचीन शब्द। यो अवधारणा प्राचीन ग्रीस मा ज्ञात थियो। यसबाहेक, बुद्धिमानी युनानी चार पहिचान प्रेम को प्रकार :
Eros - शारीरिक, शक्तिशाली शक्ति, हामी एक व्यक्तिको इच्छा र मन टाढा लिन।
FILIA - प्रेम चिल्लो, शान्त; भावना, मित्रता र छनोट।
Storge - एक कोमल, न्यानो भावना। विवाहमा आदर्श सम्बन्ध।
Agape - प्रेम साँचो, अधिवेशनले बिना जो आत्म-बलिदानको सार हो।
उच्चतम आनन्द र प्रेम ल्याउन सक्छन् परम आनन्द र सबैभन्दा गम्भीर दुखाइ बाहेक। त्यसैले चाहे त्यो यस्तो दुःख ल्याउन भने, आवश्यक छ?
पुरुष र महिला बीच यो महसूस अवस्थित छैन भने भयो होला के कल्पना गर्नुहोस्। कुनै कुरा कला कति काम ज्योति मा देखा छैन? र हामी? हामी जन्म थिए भने, यदि हाम्रो आमाबाबुले प्रत्येक अन्य को न्यानोपन महसुस छैन? यदि हाम्रो हातमा आमा र बुबा राखिएको छैन यो हाम्रो खुसी बाल्यकाल हुनेछ? यदि प्रेम के, जीवन को अर्थ छ?
एक मानिस र एक महिला बीच प्रेम को विषयवस्तु। संरचना
प्रेम सधैं यी शोषण मानिसहरूलाई प्रेरित गर्ने भावना छ। यो सुरु र युद्ध को नाम संग समाप्त हुन्छ, उहाँले चित्रित र शानदार कविता सिर्जना गरियो।
रूसी मा को रजत आयु को कविता प्रेम यो एक विशेष ठाउँ छ। कवि को ग्यालेक्सी प्रत्येक यो परिभाषा आफ्नै को कुरा ल्याए। अचम्मको जोडी - अन्ना Akhmatova र Nikolai Gumilev - फरक दृष्टिकोणबाट भावना वर्णन। अन्ना - प्रकाश, स्त्री नाजुक र नाजुक, जंगल डो रूपमा डरलाग्दो; निकोलस - मानिस, आफ्नो बाटो मा सबै मुंहतोड, र कुनै तर्क brooked।
अन्य पेंट मा चित्रण गरिएको प्रेम कवि-symbologists Mandelstam र Bal'mont ब्लक। तिनीहरूले सपना र कल्पनामा को सिटमा लुकाउँछ चाहनुहुन्छ, यो एउटा सुन्दर नौलो को एक दृश्य पछि आउँछ र नजिक सधैंभरि रहिरहन्छ।
सर्गेई Yesenin द्वारा लाग्यौं Imaginists एक obsession रूपमा प्रेम वर्णन, तर यो मुक्तिको र शरण सधैंभरि तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न, हुन सक्छ कि भन्ने आशा राखेका थिए।
जो कवि सहस्राब्दियों लागि वर्णन गर्नुभएको भावना - एक मानिस र एक महिला (तर्क, निबंध माथि) बीच प्रेम। तिनीहरूले उहाँलाई स्पष्ट परिभाषा दिनुभयो, तर किनभने उहाँको व्यक्तित्व को, र यो सही छ। उहाँले पर्खन्छ र देख्नुहुन्छ र विश्वास गर्छ प्रेम ठ्याक्कै सबैलाई आउँछ।
प्रेरणा - कि के हो?
किन भन्न कि मास्को - पाँच समुद्र को पोर्ट?
भविष्यमा पेसा: यो पेशामा यो पेशामा फरक छ
जनावर को दुनिया प्रणालीमा मानिसको स्थिति: मानव मूल प्रदर्शनमा विकास
आवधिक समारोह: सामान्य अवधारणाहरु
रूसी लोक Tales: को विशेषता भ्यागुतो राजकुमारी
स्तन देखि डिस्चार्ज - mammologist बारी गर्न एक अनिवार्य कारण।
देश मा आफ्नो हात संग फोहराहरू - यो एक तस्वीर छ
इटालियन मानसिक रोगको चिकित्सक Lombrozo Chezare: जीवनी, पुस्तकहरू, क्रियाकलाप र उपलब्धिहरू
पवित्र घाँस: ऋषि को निको गुण
पार्क परिसर "यूएसडाबा बोगोलोलोव्का"
विशेष काम अवस्था के छ? यो ... कानून 426-FZ "काम अवस्थाको विशेष मूल्यांकन मा"
केपीवीटी, मञ्च बन्दुक। ठूला-क्यालिबर मिसिन बन्दूक व्लादिमीव्रोवा सीपीवी
घर रूपमा फ्रान्सेली बनाउने? को नङ मा फ्रान्सेली - फोटो
आउटडोर Adygeya मा
होटल Olympus महल4* (स्पेन, कोस्टा Dorada): समीक्षा, वर्णन, संख्या र समीक्षा
त्यहाँ स्काइप लागि वैकल्पिक छ?
हामी अंग्रेजी मा ठेगाना पठाउन बनाउन